1यूहन्नाको सेन्ट पत्र – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / 1यूहन्नाको सेन्ट पत्र
1:1 उहाँले सुरुदेखि गर्ने थियो, जसलाई हामी सुनेका, जसलाई हामी हाम्रो आँखाले देखेको छु, हामी gazed छन् जसलाई मा, र जसलाई हाम्रो हात पक्कै छोयो: उहाँले जीवनको वचन छ.
1:2 र जीवन प्रकट गरिएको छ. र हामी देखेको छु, र हामी पुष्टि, र हामी तपाईंलाई घोषणा: अनन्तका जीवन, जसले पिता संग थियो, र हामीलाई गर्ने देखियो.
1:3 उहाँले हामी जसलाई देखेका र सुनेका, हामी तपाईंलाई घोषणा, ताकि तपाईं, पनि, हामीलाई सङ्गति सक्छ, र यति हाम्रो सङ्गति पिता संग र उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टको संग हुन सक्छ कि.
1:4 र यो तपाईं हामी लेख्न, तपाईं आनन्दित हुन सक्छ भनेर, र यति आफ्नो आनन्द पूर्ण हुन सक्छ.
1:5 र यो हामीले उहाँबाट सुनेको छु जो घोषणा छ, र जो तपाईं हामी घोषणा: परमेश्वरको ज्योति हो कि, र उसलाई कुनै अन्धकार छ.
1:6 हामी उहाँलाई सङ्गति कि दावी गर्नुभएको छ भने, र अझै हामी अन्धकारमा हिंड्न, त्यसपछि हामी झूट छन् र सत्य बताउन छैन.
1:7 तर यदि हामी ज्योतिमा हिंड्न, उहाँले पनि प्रकाश मा छ जस्तै, त्यसपछि हामी एक अर्को सङ्गति, र येशू ख्रीष्टको रगत, उस्को छोरा, सबै पाप हामीलाई शुद्ध पार्छ.
1:8 हामी कुनै पाप छ भनेर दावी गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि हामी आफूलाई धोका छन् र सत्य हामीलाई छैन.
1:9 यदि हामी हाम्रा पापहरू स्वीकार, त्यसपछि उहाँले विश्वासी छ र बस, हाम्रो पाप क्षमा र सबै iniquity हामीलाई शुद्ध गर्न ताकि.
1:10 हामी पाप छैन भनेर दावी गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि हामीले उहाँलाई झूटो बनाउन, र उहाँको वचन हामीलाई छैन.
2:1 मेरो सानो छोरा, यो म लेख्न, त्यसैले तपाईं पाप नहुन सक्छन् कि. तर जो कोहीले पाप गरेको छ भने, हामी पिता संग समर्थक छ, जीसस क्राइष्ट, को बस एक.
2:2 र उहाँले हाम्रो पापको लागि propitiation छ. र हाम्रो पापको लागि मात्र, तर सारा संसार को गर्नेहरूका लागि पनि.
2:3 र हामी यस उसलाई ज्ञात छ भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ: हामी उहाँको आज्ञा पालन यदि.
2:4 जसले उहाँलाई थाह छ कि दाबी, र उहाँका आज्ञा पालन गर्दैन, झूटो छ, र सत्य उहाँमा छैन.
2:5 तर जसले उहाँको वचन राख्छ, साँच्चै उसलाई परमेश्वरको दान सिद्ध छ. र यो हामी हामी उहाँलाई छन् भनेर थाहा.
2:6 उहाँलाई रहन जसले आफूलाई घोषणा, उहाँले हिंडे जस्तै हिंड्न पर्छ.
2:7 सबैभन्दा प्रिय, म तपाईंलाई एउटा नयाँ आज्ञा लेखन होइन, तर पुरानो आज्ञा, तपाईं जो सुरुदेखि थियो. पुरानो आज्ञा वचन छ, जो तपाईं सुनेका.
2:8 त्यसपछि पनि, म तपाईंलाई एउटा नयाँ आज्ञा लेख्दै छु, जो उसलाई र तपाईंलाई सत्य छ. अन्धकारका लागि बितिसकेका छ, र साँचो लाइट अब चमक छ.
2:9 ज्योति मा हुन जसले आफूलाई घोषणा, र उहाँका भाइ घृणा, अब पनि अन्धकारमा छ.
2:10 जसले आफ्नो भाइ प्रेम ज्योति मा abides, र उहाँलाई ठेस कुनै कारण छ.
2:11 तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ अन्धकारका छ, र अन्धकारमा उहाँले हिँड्छ, र उहाँले जाँदै छ जहाँ थाहा छैन. अन्धकारका लागि आफ्नो आँखा blinded छ.
2:12 I am writing to you, सानो छोरा, because your sins are forgiven for the sake of his name.
2:14 I am writing to you, little children, because you have known the Father. I am writing to you, जवान मानिसहरू, because you are strong, and the Word of God abides in you, and you have overcome the evil one.
2:18 सानो छोरा, यो अन्तिम घण्टा छ. र, तपाईं एटिक्राईष्ट आउँदै छ भनेर सुनेको छु रूपमा, त्यसैले अब धेरै antichrists आइपुगेको छ. यो द्वारा, हामी यो अन्तिम घण्टा हो भनेर थाहा.
2:19 तिनीहरूले हामीलाई बीचबाट बाहिर गए, तर तिनीहरूले हामीलाई को छैन. लागि, यदि तिनीहरूले हामीलाई को भएको थियो, पक्कै पनि तिनीहरू हामीलाई साथ रह्यो होला. तर यसरी, तिनीहरूलाई को कि कुनै पनि प्रकट भएको छ हामी हो.
2:20 अझै तपाईं पवित्र को anointing छ, र तपाईं सबै कुरा थाहा.
2:21 म सत्य को नजान्ने भएका व्यक्तिहरूलाई रूपमा गर्न लेख्नुभएको छैन, तर व्यक्तिहरूलाई रूपमा गर्ने सत्य थाहा. कुनै झूट लागि सत्य छ.
2:22 जो झूटो छ, येशूले ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर इनकार जसले भन्दा अन्य? यो एक एटिक्राईष्ट छ, जसले पिता र पुत्र इनकार.
2:23 पुत्र इनकार गर्ने कुनै एक पनि पिता छ. जसले पुत्र confesses, पनि पिता छ.
2:24 तपाईं लागि जाँदा, तपाईंलाई रहने तपाईं सुरुदेखि सुनेका के गरौं. तपाईंलाई के तपाईं सुरुदेखि सुनेका रहिरहन्छ भने, अनि तिमी, पनि, पुत्र र पिता मा पालन गर्नेछु.
2:25 र यो बाचा छ, जो उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ: अनन्त जीवन.
2:26 म तपाईंलाई यी कुराहरू लेखिएको छ, किनभने तपाईं बहकाउने गर्नेहरूलाई को.
2:27 तर तपाईं को लागि रूपमा, तपाईं उसलाई प्राप्त गर्नुभएको Anointing तपाईंलाई पालन गरौं. अनि त, के तपाईं सिकाउन कसैलाई कुनै आवश्यकता छ. आफ्नो Anointing लागि सबै बारेमा सिकाउँछ, र यो सत्य हो, र यो झूट छ. र उहाँको Anointing तपाईं सिकाउनुभएको छ रूपमा, उहाँलाई पालन.
2:28 र अब, सानो छोरा, उहाँलाई पालन, त्यसैले उहाँले देखिन्छ जब कि, हामी विश्वास हुन सक्छ, र हामी आफ्नो आगमन मा उहाँलाई द्वारा हैरान हुन सक्छ.
2:29 उनले छ भन्ने थाहा छ भने, त्यसपछि थाहा, पनि, के बस उहाँलाई जन्म भएको छ गर्छन् सबै कि.
3:1 हामीलाई बुबा दिइएको छ प्रेम कस्तो प्रकारको हेर्नुहोस्, हामी भनिन्छ हुनेछ भनेर, र हुनेछ, परमेश्वरका छोराहरू. किनभने यो, संसारको हामीलाई थाहा छैन, यो उहाँको थाहा थिएन.
3:2 सबैभन्दा प्रिय, अब हामी परमेश्वरका छोराहरू हुन्. तर हामी हुनेछ कुन त्यसपछि अझै देखा छैन. हामी त्यो देखा गर्छ जब कि थाहा, हामी उहाँलाई जस्तै हुनेछ, उहाँ हामी उहाँलाई देख्नेछन् लागि.
3:3 र उहाँलाई यो आशा धारण गर्ने सबैलाई, आफूलाई पवित्र राख्छ, उहाँले पनि पवित्र छ जस्तै.
3:4 एक पाप गर्ने सबैलाई, पनि iniquity commits. पापको लागि iniquity छ.
3:5 र तपाईं उहाँले लिन टाढा हुन सक्छ हाम्रो पापको क्रममा देखा भनेर थाहा. उहाँलाई कुनै पाप छ.
3:6 उहाँमा abides हरेकले पाप गर्दैन. जसले लागि पाप उहाँलाई देखेको छैन, र उसलाई ज्ञात छैन.
3:7 सानो छोरा, कुनै एक तपाईं धोका गरौं. जसले गर्छ न्याय बस, उहाँले पनि बस पनि रूपमा.
3:8 जसले पाप शैतानको छ. सुरुदेखि शैतानको पापको लागि. यस कारण, परमेश्वरको पुत्र देखा, उहाँले शैतानको कामहरू उन्मूलन हुन सक्छ भनेर.
3:9 परमेश्वरको जन्मेको सबै ती पाप छैन. परमेश्वरको सन्तानको लागि तिनीहरूलाई मा abides, र उहाँले पाप गर्न सक्षम छ, उहाँले परमेश्वरको जन्म भएको थियो किनभने.
3:10 यसरी, परमेश्वरका छोराहरू प्रकट गर्दै, र पनि शैतानको सन्तान. छैन जो सिर्फ सबैलाई, परमेश्वरको छैन, रूपमा पनि आफ्नो भाइलाई माया गर्छ नगर्ने जो कोहीलाई पनि.
3:11 यो लागि सुरुदेखि सुनेको घोषणा छ: तपाईं एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर.
3:12 कयिनले जस्तै छैन, जसले दुष्ट एक को थियो, र आफ्नो भाइ जो मारिए. र किन उहाँलाई मार्न गर्नुभयो? किनभने आफ्नै काम दुष्ट थिए, तर आफ्नो भाइ गरेको काम बस थिए.
3:13 संसारको तपाईं घृणा भने, भाइहरूले, छक्क छैन.
3:14 हामी मृत्युबाट जीवनमा पारित गरेको छ भनेर थाहा. हामी भाइहरूलाई प्रेम. जसले प्रेम गर्दैन, मृत्युको abides.
3:15 आफ्नो भाइ घृणा गर्ने सबैलाई एक हत्यारा हो. र तपाईं कुनै हत्यारा अनन्त जीवन उहाँलाई भित्र पालन गरेको छ भनेर थाहा.
3:16 हामी यसरी परमेश्वरको प्रेम थाह: उहाँले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन राखे किनभने. अनि त, हामी हाम्रा भाइहरूको लागि हाम्रो जीवन पल्टिने पर्छ.
3:17 जसले यो संसारको सामान possesses, र आवश्यकता मा हुन आफ्नो भाइ देख्नुहुन्छ, र अझै उसलाई आफ्नो हृदय बंद: कुन तरिकामा परमेश्वरको प्रेम उहाँमा पालन गर्छ?
3:18 मेरो सानो छोरा, हामीलाई शब्दमा प्रेम गरौं मात्र, काम र सत्य तर.
3:19 यसरी, हामी सत्यको हो भनेर थाहा हुनेछ, र हामी आफ्नो दृष्टि हाम्रो हृदय प्रशंसा हुनेछ.
3:20 हाम्रो हृदयले हामीलाई reproaches पनि यदि लागि, परमेश्वरले हाम्रो हृदय भन्दा ठूलो छ, र उहाँले सबै कुरा थाह छ.
3:21 सबैभन्दा प्रिय, हाम्रो हृदयले हामीलाई निन्दाले छैन भने, हामी परमेश्वरको तिर विश्वस्त हुन सक्छन्;
3:22 र जो हामी उहाँलाई अनुरोध गर्नेछ, हामी उहाँलाई प्राप्त गर्नेछ. हामी उहाँका आज्ञा पालन, र हामी आफ्नो दृष्टि मा खुसी छन् कि कुरा के.
3:23 र यो आफ्नो आज्ञा हो: हामी आफ्नो छोराको नाम मा विश्वास गर्नुपर्छ कि, जीसस क्राइष्ट, र एक आपसमा प्रेम, उहाँले हामीलाई आज्ञा छ जस्तै.
3:24 र जो आफ्नो आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई उहाँलाई पालन, र उहाँले तिनीहरूलाई मा. र हामी उहाँले यो हामीलाई मा abides भनेर थाहा: आत्मा द्वारा, जसलाई उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ.
4:1 सबैभन्दा प्रिय, do not be willing to believe every spirit, but test the spirits to see if they are of God. For many false prophets have gone out into the world.
4:4 सानो छोरा, you are of God, and so you have overcome him. For he who is in you is greater than he who is in the world.
4:5 They are of the world. त्यसैले, they speak about the world, and the world listens to them.
4:6 We are of God. Whoever knows God, listens to us. Whoever is not of God, does not listen to us. यसरी, we know the Spirit of truth from the spirit of error.
4:7 सबैभन्दा प्रिय, हामीलाई एक आपसमा प्रेम गरौं. प्रेम लागि परमेश्वरको छ. र परमेश्वरको जन्मिएको छ प्रेम गर्ने र सबैलाई परमेश्वरको थाह.
4:8 जसले प्रेम गर्दैन, परमेश्वरको थाहा छैन. परमेश्वरको प्रेम छ.
4:9 परमेश्वरको प्रेम यसरी हामीलाई स्पष्ट गरिएको थियो: परमेश्वरले संसारमा आफ्नो प्यारो छोरा पठाउनुभयो, हामी उहाँमार्फत बाँच्न सक्छ त.
4:10 यो प्रेम छ: हामी परमेश्वरको प्रेम थिएन भने, तर उहाँले हामीलाई पहिलो प्रेम, र त त्यो हाम्रो पापको propitiation आफ्ना पुत्र पठाउनुभयो.
4:11 सबैभन्दा प्रिय, परमेश्वरको त्यसैले हामीलाई प्रेम छ भने, हामी पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ.
4:12 कुनै एक कहिल्यै परमेश्वरको देखेको छ. तर यदि हामी एकअर्कालाई प्रेम, परमेश्वरले हामीलाई मा abides, र आफ्नो प्रेम हामीलाई सिद्ध छ.
4:13 यसरी, हामी उहाँलाई पालन भनेर थाहा, र उहाँले हामीलाई: उहाँले आफ्नो आत्मा हामीलाई दिइएको छ किनभने.
4:14 र हामी देखेको छु, र हामी पुष्टि, कि पिता संसारको मुक्तिदाता हुन आफ्नो पुत्रलाई पठाउनुभएको छ.
4:15 जसले येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेको छ, परमेश्वरले उहाँलाई मा abides, र परमेश्वरको उहाँले.
4:16 र हामी ज्ञात र परमेश्वरले हामीलाई लागि छ कि प्रेम विश्वास छ. परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ. र उहाँले गर्ने प्रेममा abides, परमेश्वर abides, र उसलाई परमेश्वरको.
4:17 यसरी, the love of God is perfected with us, so that we may have confidence on the day of judgment. For as he is, so also are we, in this world.
4:18 Fear is not in love. बरु, perfect love casts out fear, for fear pertains to punishment. And whoever fears is not perfected in love.
4:19 त्यसैले, हामीलाई परमेश्वरको प्रेम गरौं, परमेश्वरको लागि पहिलो हामीलाई प्रेम गर्नुभयो.
4:20 जो कोहीले उहाँले परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर भन्छन् भने, तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, त्यसपछि उहाँले झूटो छ. उहाँले लागि जो आफ्नो भाइलाई माया गर्दैन, जसलाई उहाँले देख्न गर्छ, कुन तरिकामा परमेश्वरको प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई उहाँले देख्न गर्छ?
4:21 र यो हामी परमेश्वरको छ कि आज्ञा हो, त्यो जो परमेश्वरले आफ्नो भाइलाई माया पर्छ प्रेम.
5:1 येशूले ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने सबैलाई, परमेश्वरको जन्मिएको छ. र सबैलाई परमेश्वरको प्रेम, जो कि जन्म प्रदान, पनि परमेश्वरको जन्म गरिएको छ जो उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ.
5:2 यसरी, हामी परमेश्वरको जन्म ती मन भनेर थाहा: हामी परमेश्वरको प्रेम गर्दा र उहाँको आज्ञा के.
5:3 यो लागि परमेश्वरको प्रेम छ: हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्ने. र उहाँका आज्ञाहरू भारी हो.
5:4 परमेश्वरको जन्मिएको छ कि सबै को लागि दुनिया overcomes. र यो संसारको overcomes विजय हो: हाम्रो विश्वास.
5:5 यो दुनिया overcomes कि जो छ? मात्र उहाँले जो येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छ!
5:6 यो पानी र रगत द्वारा आए जो एक छ: जीसस क्राइष्ट. द्वारा पानी मात्र होइन, तर द्वारा पानी र रगत. र आत्मा ख्रीष्टको सत्य हो कि पुष्टि गर्छ जसले एक छ.
5:7 त्यहाँ तीन छन् कसले स्वर्गमा गवाही दिन: बाबा, शब्द, र पवित्र आत्मा. र यी तीन एक हो.
5:8 र त्यहाँ पृथ्वीमा गवाही दिने तीन छन्: आत्मा, र पानी, र रगत. र यी तीन एक हो.
5:9 यदि हामी मानिसहरूको गवाही स्वीकार, त्यसपछि परमेश्वरको गवाहीलाई ठूलो छ. यो परमेश्वरको गवाहीलाई छ, जो ठूलो छ: उहाँले आफ्नो पुत्रलाई बारेमा testified छ कि.
5:10 जसले परमेश्वरको छोरामाथि विश्वास गर्छ, आफूलाई भित्र परमेश्वरको गवाहीलाई धारण. छोरामाथि जसले विश्वास गर्दैन, उहाँलाई झूटो बनाउँछ, उहाँले परमेश्वरले आफ्नो पुत्र बारेमा testified छ जो गवाही विश्वास छैन किनभने.
5:11 र यो जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ गवाहीलाई छ: अनन्त जीवन. र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ.
5:12 जसले पुत्र छ, जीवन छ. जसले पुत्र छैन, जीवन छैन.
5:13 म तिमीलाई यो लेख्दै छु, ताकि तपाईं अनन्त जीवन छ भन्ने थाहा हुन सक्छ: परमेश्वरको पुत्रको नाममा विश्वास जसले तपाईंलाई.
5:14 र यो हामी परमेश्वरको तिर जो विश्वास छ: कि हामी अनुरोध गर्नेछ के कुनै कुरा, आफ्नो इच्छाबमोजिम मा, उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ.
5:15 र हामी उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ भन्ने थाहा, कुनै कुरा हामी के अनुरोध; त्यसैले हामीले उहाँलाई अनुरोध छ कि कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाहा.
5:16 आफ्नो भाइ पाप छ भनेर बुझ्छ जो कोहीले, छ कि छैन मृत्यु निम्ति पाप संग, उहाँलाई प्रार्थना गरौं, र जीवन मृत्यु निम्ति छैन पाप छ जो उसलाई दिइएको गरिनेछ. त्यहाँ मृत्यु निम्ति हो जो पाप हो. म कुनै पाप तर्फबाट सोध्नुपर्छ भन्दै होइन.
5:17 सबै iniquity छ पाप हो. तर त्यहाँ मृत्यु निम्ति पाप हो.
5:18 हामी थाहा परमेश्वरको जन्मिएको छ जसले सबैलाई पाप गर्दैन. बरु, परमेश्वर rebirth उहाँलाई जोगाउनुहुन्छ, र दुष्ट एक उसलाई छुन सक्दैन.
5:19 हामीलाई थाहा छ हामी परमेश्वरको हो भनेर, र सम्पूर्ण संसारको दुष्टता मा स्थापित छ.
5:20 र हामी परमेश्वरको पुत्र आइपुगेको छ भनेर थाहा, र उहाँले हामीलाई समझ दिनुभएको, हामी साँचो परमेश्वरको थाहा हुन सक्छ भनेर, र हामी आफ्नो साँचो छोरा रहन सक्छ भनेर. यो साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, र यो अनन्त जीवन छ.
5:21 सानो छोरा, झूटो उपासना बाट आफूलाई राख्न. Amen.